Yini inhlangano esemthethweni? | Ezezimali Zomnotho
Yini inhlangano esemthethweni?
Vele, igama lebhizinisi elisemthethweni lilalelwa kabanzi yingxenye enkulu yezakhamizi, yize bazi kahle ukuthi iyini incazelo yalo. Ukulungisa lesi sigameko solimi, kuzodingeka ukuthi sisho ukuthi ngokuyisisekelo kubhekiswa kumuntu ongelona iqiniso okwazi ukwenza sebenzisa amalungelo futhi uthole izibopho zokwenza imisebenzi ebangela umthwalo ophelele wezomthetho. Inokubaluleka okukhethekile ukuthuthukisa izinkontileka ezahlukahlukene lapho kudingeka khona lesi sibalo esithile futhi okungaqondakala kangcono ngochungechunge lwezibonelo.
Esinye sezici okufanele sigcizelelwe kusukela ekuqaleni ukuthi akudingeki sivumelane nesimo somuntu wemvelo. Ngoba empeleni, kwezinye izimo kuzofana, kepha kokunye akunjalo. Phakathi kwezinye izizathu ngoba umqondo womuntu ubanzi kakhulu ngokuvumela izenzo okufanele zenziwe, zombili nezinkampani njengabantu. Ububanzi bayo, ngakho-ke, bungenye yezinhlaka zayo ezivamile kanye nencazelo leli gama eliqondiswe kuyo ukuthi uzwe kaningi empilweni yakho.
Ngakolunye uhlangothi, udinga ukwazi ukuthi indima enikezwa iqembu elithile lezenhlalo noma lochwepheshe likhulu ukuze likwazi ukubamba iqhaza kunqubo uhlelo lwezomthetho. Ngenhloso eyisisekelo yokufeza izinjongo ezilandelwa yiwo wonke amalungu alo. Akumangalisi ukuthi kunengozi yokuphambanisa leli gama elifanele nelomuntu ngamunye kanti empeleni akunjalo, njengoba kuchaziwe kulesi sethulo esifushane.
1 Umuntu osemthethweni: umehluko
2 Izixhumanisi nezinye izibalo
3 Izinzuzo zaleli fomu elisemthethweni
4 Okubi ngabantu abasemthethweni
5 Izindikimba ezibusayo
Umuntu osemthethweni: umehluko
Kufanele wazi ngaphezu kokunye ukucatshangelwa kukhona umehluko omkhulu kakhulu maqondana namanye amagama ajwayelekile kakhulu kulesi sigaba sezihloko, njengomuntu wemvelo. Yebo, lesi sakamuva sizozibhekela mathupha isibopho se- izikweletu nezibopho ukuthi inkampani ingacabanga ngesinye isikhathi noma kwenye. Ngenkathi kwenzeka okuphambene nalokho, kumuntu osemthethweni lesi sehlakalo sinqunyelwe kwizimpahla zenkampani. Okunye okwehlukile ngukuthi umuntu wemvelo wakhiwa ngumuntu oyedwa.
Esinye isibonakaliso esibalulekile sokubona lesi sibalo esikhetheke kakhulu sisekelwe ekubonakaleni kwakho. Lokho kusho ukuthi kusebenza ukuze umuntu noma ibhizinisi (lanoma yiluphi uhlobo) libe namalungelo nezibopho ngasikhathi sinye. Lokhu kubaluleke kakhulu ezinkambisweni zomthetho abangadlula kuzo. Noma i- ukuqala kwenkampani noma iphrojekthi yezobuchwepheshe. Akumangalisi ukuthi inquma izenzo zesikhathi esizayo ezindaweni ezahlukahlukene zenqubo yokuphatha. Ukufika ezingeni lokuthi zingasebenza ekunikezelweni kwezezimali noma usizo lwanoma iluphi uhlobo nesimo.
Izixhumanisi nezinye izibalo
Akukho okungcono ukwedlula ukugqamisa okunye ukuqhathanisa ukuze kufinyelele encazelweni yangempela yegama elisithinta kulesi sihloko. Ngalo mqondo, esinye sezihluthulelo ezifanele kakhulu ukuthola ukuthi yini isibalo esisemthethweni sisebenza ngento elula njengaleyo engaba yiyo sizinkampani zomphakathi ezinqunyelwe, izinkampani ezinqunyelwe, ngokungaqondakali. Kuzo zombili lezi zimo kukhona abantu bezomthetho. Yize ngezikhathi ezithile kufanele wazi ukuthi lesi sibalo sifihliwe ngaphansi kwamagama ezinkampani. Ukuze kugwenywe isikweletu uma kwenzeka othile enza isimangalo kubo, futhi yize kuyinqubo esemthethweni, kubalulekile ukucacisa ukuthi akuyona inqubo enconywe kakhulu kusuka endaweni yokuziphatha. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa okuzoba yisihloko sokunye ukuhlaziywa okuningiliziwe.
Ngabe ufuna ukwazi ezinye zezibonelo ezimele umuntu osemthethweni? Ungaba nokumangala okuyinqaba ngoba zizofakwa ezaziwa kakhulu kuwo wonke umuntu, njenge-Inditex, i-El Corte Inglés noma i-Leroy Merlin. Ngamanye amagama, bangaba ngabanikazi bezinkampani ezibalulwe ezimakethe zezimali. Ngoba empeleni, ezimweni eziningi ingamela izinkampani ezisebenzisa i umsebenzi wentengiso. Njengasendabeni yalabo esichazile kule ndatshana. Ukuze ngale ndlela usuvele ucace kancane ukuthi yini umthelela wangempela waleli gama ongaba yinkimbinkimbi ngokuqonda kwayo okulungile.
Izinzuzo zaleli fomu elisemthethweni
Kunoma ikuphi, umuntu osemthethweni uphatha uchungechunge lweminikelo uma uhlanganiswe nalesi sibalo. Kungenzeka usuvele wazi ezinye zazo, kepha ezinye zingakumangaza futhi zizuze nakuzo. Phakathi kwazo kukhona lezo esikudalula kuzo ngezansi:
Usesimweni sokuba ne- imali enkulu ngoba inganikelwa ngabanye ozakwethu. Leli isu elisebenza kahle kakhulu lokukhulisa ibhizinisi, izinkampani noma iyiphi iphrojekthi yobungcweti.
Kuzo zonke izimo uzoba nokuhle ukufinyelela kolayini besikweletu amabhizinisi ebhange enza inzuzo. Ngokuncamela ezinye izinhlobo zamakhasimende, kufaka phakathi abantu. Kepha ngenani elengeziwe njengalezo zizokwenziwa zibe semthethweni ngezimo ezingcono zenkontileka ukuze ngale ndlela wonge ama-euro ambalwa ekusebenzeni kwe-accounting.
Enye yeminikelo yakhe efanelekile ilele ekutheni umuntu osemthethweni usesimweni sokuthola amathenda womphakathi ngaphandle imikhawulo emikhulu. Ngokukhetha okuthile maqondana nezinye izibalo futhi lokho kungakusiza ukuthi ufeze izinhloso zakho maqondana nalezi zindlela.
Ngokuphathelene nesigaba esandulele kukhona okunye okutholakele okungaba mnandi kakhulu ukuvikela izintshisekelo zakho ngisho nasendaweni yokubuka yobungcweti. Kuyiqiniso elisuselwa ekubandakanyeni uchungechunge lwe izinzuzo zomphakathi futhi kuphephile nokuthi bebengeke bakuthole ngenye indlela. Ngisho nokwamukela ulayini othile wezezimali owethulwe ezinhlakeni ezisemthethweni.
Futhi ekugcineni, ngeke kulibaleke nganoma yisiphi isikhathi izinhlangano ezisemthethweni ezinakho isikweletu esilinganiselwe. Lokhu kusebenza kusho ukuthi bakhawulela kakhulu umthwalo wabo wezibopho noma izikweletu inkampani engaba nazo. Ukuthi leli qiniso lingaba yinzuzo enkulu kubo ngesinye isikhathi ezimpilweni zabo.
Okubi ngabantu abasemthethweni
Kepha akuzona zonke izinzuzo ngaleli nani elikhethekile, kepha kunokuphazamiseka okuthile okufanele ukukhumbule uma ukulesi simo. Ngalo mqondo, akumangazi ukuthi uthola isimanga esingajwayelekile ngezindlela ezithile. Njengalezo esizokukhombisa zona ngezansi.
Akungabazeki ukuthi ukubuyela emuva kwayo okukhulu ukuthi kudinga ifayela le- ukutshalwa kwezimali okuphezulu ngomthethosisekelo wayo. Lokho wukuthi, kuzobandakanya umzamo omkhulu wezezimali kunalokho ozokwenza ukuze ube yinhlangano esemthethweni uma lokhu kuyisifiso sakho ngempela.
Ngakolunye uhlangothi, umzamo wokuphatha kuzoba kukhulu kakhulu. Akumangalisi ukuthi ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokuhambisa inani elikhulu kakhulu lamadokhumenti ezimali. Lokhu kungatshelwa ngabantu abadlule kulesi simo ngoba izinqubo zokuphatha zizokwanda ngaphezu kokujwayelekile.
El ukulawula umphakathi isatshalaliswa kakhulu kunakwabanye ngoba abaphathi bangawela kubantu abaningana. Babhekwa njengabalingani futhi kuzoba nezimpikiswano eziningi zokuthatha isinqumo noma zokwenza noma yikuphi ukuphathwa kwezomnotho noma kwezomthetho. Lokhu ngumehluko obuyisela abantu abaningi emuva esifisweni sabo sokuzibonakalisa njengenhlangano esemthethweni.
Akungabazeki ukuthi omunye weminikelo yakhe emibi kakhulu usekelwe ekutheni lesi sibalo siletha ubunzima obukhulu kuvalwe noma kuthengiswe. Akuyona inqubo elula njengoba ingenzeka ngezinye izinhlobo zezibalo.
Uma okufunayo ngempela ukukhulisa noma ukunciphisa ukulingana Vele, ezinye izinkinga zikulindile njengoba imikhawulo iphakeme. Kuze kube seqophelweni lokuthi ukwazi ukuzibona ucwile ezigamekweni ngokombono wokubalwa kwezimali.
Ekugcineni, kufanele ukhumbule ukuthi umuntu osemthethweni akusona isimo esihle ngaso sonke isikhathi sokusungula inkampani. Ngokuphambene nalokho, kukhona amanye amafomethi azosiza kakhulu ukuvikela izintshisekelo zakho. Kumele ubuze ngabo uma kwenzeka unentshisekelo yokwamukela ifomula yomthethosisekelo.
Esinye isici esibaluleke kakhulu yilokho okuphathelene nokulawulwa kwaso. Ngalo mqondo, ukuba khona kwabantu bemvelo kuyadingeka kakhulu ukunquma ukuthi impahla onayo iya kuphi. Awukwazi ukukhohlwa ukuthi imizimba ilawulwa ngumthetho futhi yizimiso ezethulwa ngabantu bezomthetho. Phakathi kwalokhu okulandelayo kugqama ngenxa yokufaneleka kwawo okukhethekile:
El umlawuli yiyona ejwayelekile kunazo zonke.
Isibalo esiyinkimbinkimbi njengoba kunjalo esimweni esithile salokho okuthiwa abaphathi bobumbano.
El ibhodi labaqondisi Ngenye yemigomo ozojwayeleka ngayo ngoba isetshenziswa kaningi ngabantu abasemthethweni.
Futhi njengesinqumo sokugcina, ezinye izinhlaka ezilawulayo njenge abanikazi bamasheya noma ibhodi labalingani, phakathi kwezinye ezibaluleke kakhulu futhi ngasikhathi sinye ezivamile. Akungabazeki ukuthi yibo abazozwakala kakhulu kuwe njengamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » Yini inhlangano esemthethweni?
Yiziphi izikhwama ezingamangaza ukuphela konyaka?